घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू Perr Schuurs बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो पेर शूवर्सको जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
कुरा स्पष्ट राख्न, हामी यहाँ छ - आफ्नो जीवन कहानी को एक ब्रेकडाउन, शुरुआती दिन देखि जब उहाँ प्रसिद्ध भयो। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल छ - Perr Schuurs Bio का एक सही सारांश।
हुनसक्छ तपाईंले पहिलो पटक उसको नाम सुन्नुभयो लिभरपूलले एजेक्स डिफेन्डरको निगरानी गर्न शुरू गर्यो घाइते को जुत्ता भर्न Virgil van Dijk - (२०२०/२०१२ EPL सत्रको सुरूमा)। तर हुनसक्छ तपाईले उनको जीवनको कथा पढ्नु भएको छैन। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Perr Schuurs बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ 'नयाँ भर्जिल भ्यान डिजक'। पेर श्युरसको जन्म नोभेम्बर १ 26 1999। को २ XNUMX औं दिनमा उनको बुबा, लम्बर्ट शुवर्स र आमा मोनिक स्कर्सको नेदरल्याण्ड्सको सानो शहर नीउवस्टाडमा भएको थियो।
डच फुटबलर आफ्ना बुबाआमाबाट जन्मेका तीन छोरा (एक छोरा र दुई छोरीहरू) मध्ये एक मात्र छोरा हो। मोनिक, उनको आमा, उनको late० को दशकमा देखिन्छ जबकि लाम्बर्ट, उनको बुवा, 40० को दशकमा।
पेर शुर्सले आफ्नो बाल्यावस्था उनका दुई गाउँ डेमी र फ्लाउसँगै निउवास्टैड गाउँमा बिताए। अन्तिम परिवारमा जन्मेको बच्चा वा उसको परिवारको बच्चा, पेर हुर्काइन् आफ्ना परिवारका सबै सदस्यहरूले स्वस्थ जीवनशैली बिताइरहेका छन्, जसले खेल समावेशीकरणलाई सम्भव बनाउँदछ। यस्तो जीवनशैली सब भन्दा प्रारम्भिक संकेत थियो जसले उनको भाग्य प्रज्वलित गर्‍यो।
Perr Schuurs परिवार पृष्ठभूमि:
केन्द्र कस्तो राम्रो घर बाट आउँछ! मनपर्‍यो ईडेन ह्याजार्डको परिवार, पेरको परिवारमा सबैको ईतिहास हुन्छ वा शीर्ष खेलमा आफूलाई सामेल गर्नुहोस्। उसको बुवा (लाम्बर्ट), पहिलो स्थानमा, ह्यान्डबलको दन्त्यकथा हो र एक पटक एक अति लामो दूरी चलिरहेको छ। उसको आमा मोनिक पनि खेल - Maze मा थिए।
लाम्बर्ट र उनकी श्रीमती मोनिकले उनीहरूको पेशालाई कहिले पनि जबरजस्ती गरेनन्। उनीहरूले फ्लो, डेमी र पेरलाई उनीहरूको मनपर्दो खेल अँगाल्न दिए। पेरले फुटबल छनौट गर्दा, उनकी जेठी बहिनी डेमी टेनिसमा गइन्। पछिल्लो तर कम्तीमा पनि होइन (फ्लू शूउर्स) ले उनको बुवाको पेशा लिएको छ।
कस्तो खेल परिवार। डेमी (बाँया) टेनिसमा छ, पेर (मध्य) फुटबल हो र फ्लियो (दायाँ) ह्यान्डबल गर्दछ।
पेर शुर्स परिवार मूल:
केन्द्र Nieuwstadt, 3088 भन्दा कम मान्छे संग एक सानो शहर को पछाडि लाग्यो। यस बस्तीमा घरपरिवारले आफूलाई एक ठूलो परिवारको रूपमा लिन्छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, जहाँ पेर शूर्सको परिवार (न्यूवस्टेड) ​​बाट आएको छ नेदरल्याण्ड र जर्मनीको पूर्वी बीचको सीमा पार गर्ने काम गर्दछ।
Perr Schuurs फुटबल कहानी - क्यारियर डिस्कवरी:
प्रारम्भमा, परिवारको प्रमुख (लाम्बर्ट शुवर्स) ले एक योजना बनायो जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई परिवारको सपनाहरू बजार्न दिनेछ जब उहाँ र उनकी श्रीमती (मोनिक) खेलकुदबाट अवकाश लिनुहुन्छ।
एउटा शुभ दिन, लम्बर्टले पेर र तिनका दिदीबहिनीलाई (जब उनीहरू एकदमै सानो थिए) नेदरल्याण्ड्सको शहर सिट्टार्डको स्पोर्ट्स हलमा लगे।
पेर दुई वर्षको थियो - लम्बर्टले फेरि बोलाए। ऊ मुश्किलले हिड्न सक्थ्यो तर बलसँग कसरी व्यवहार गर्ने जान्छ। उनले स्वाभाविक रूपमा खेलकुदको प्रतिभा विकास गरे।
वास्तवमा, प्रतिभा खोज अन्वेषण मात्र पेरमा भएको थिएन। दरबारमा, फ्लोले भाग्यको साथ मिति पाए किनभने उनी (त्यो धन्यको क्षण) ह्यान्डबलको साथ प्रेममा परिणत भइन् र उनीको बुवाको पाइला पछ्याउन राजी भए - ह्यान्डबल खेलाडी बन्न। डेमीले टेनिसलाई पनि अंगालो हाले।
सानो पियर बच्चाको बच्चामा हुर्किएपछि उनले आफुको परिवारको खेलकुद मानसिकता खपत गरेको देखे। तपाईंले समेत बिभिन्न खेलको मार्ग अपनाउनुभयो, नम्र केटाले आफ्ना दिदीबहिनी र बुबाबाट धेरै कुरा सिके जसलाई उनले आफ्ना मूर्तिहरू मान्दछन्।
प्रारम्भिक क्यारियर जीवन - कम उमेरमा सार्वजनिक मान्यता प्राप्त गर्दै:
चार वर्षको कोमल उमेरमा, उत्साहित बच्चाले उनको गाउँको पुरानो फुटबल टीम एफिया रियाको युवा एकेडेमी रोस्टरमा आफूलाई भेट्टायो। त्यहाँ उनले एक स्ट्राइकरको रूपमा शुरू गरे, जुन पछि उनी ठूलो टोली, फोर्टुना सिटार्डले १० मा समाते।
एक बच्चाको रूपमा पेरको फुटबल र गैर फुटबल खेल्ने गुणहरू असाधारण थिए। उहाँ बच्चा हुनुहुन्थ्यो जसले सार्वजनिक बोलीमा उत्कृष्ट नेतृत्वका गुणहरू देखाउनुभयो।
हामीसँग उसको बाल्यकाल बहादुरीको प्रमाण छ। सुरु गर्नका लागि, यहाँ भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ - जुन क्षण उनले ठूलो भविष्यका लागि आफ्नो भविष्यको बारेमा भने। पेरले आफ्ना अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूको अगाडि बोले।
उसको पेरको भाषणको त्यो क्षणदेखि, कार्यक्रममा उपस्थित सबै परिवारलाई थाँहा थियो कि उसले आफ्नो क्यारियरको जीवनमा यसलाई ठूलो बनाउँदैछ।
Perr Schuurs जीवनी - फेम कहानी को मार्ग:
पछि, उदाउँदो ताराले देख्यो फोर्टुना सिटार्ड उमेर समूहहरूको माध्यमबाट उनले शान्त प्रगति गरिरहेको छ। त्यहाँ छँदा, Perr स्थिति परिवर्तन, पहिले एक बचाव मिडफील्डर। उसको कोचले निरीक्षण गरेपछि ऊ धेरै छिटो र अग्लो हुँदै गयो (Ft फिट inches इन्च उचाई), जवानलाई त्यसपछि सेन्टर डिफेन्डिंगमा पठाइयो - उनको एकेडेमी स्नातक भन्दा ठीक अघि।
छ मौसमका लागि, पेरेले उनीहरूलाई चार अवसरमा च्याम्पियन बन्न सहयोग गरे। १ 17 वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो प्रशिक्षक र प्रशिक्षकले फोर्टुना सिटार्डको कप्तान बनाए। आइतवार ओलिसे (एक पूर्व नाइजेरियाई कोच र फुटबलर)। त्यतिखेर, उनले आफ्नो शिक्षाको साथ खेललाई जिस्काए - नेदरल्याण्ड्सको बोर्नको बोर्नको डाकापो कलेजमा अन्तिम परीक्षा दिए।
शिक्षा र फुटबलमा ध्यान केन्द्रित गर्दा दुबै पक्षमा उसको प्रदर्शनलाई कहिले पनि रोक्दैन। कप्तानको रूपमा, Perr ले आफ्नो चौथो ट्रफी उचाल्न मा आफ्नो टीम निर्देशित। प्रशंसकले उनीहरूलाई नेदरल्याण्डको दोस्रो सबैभन्दा उच्च फुटबलमा पदोन्नति गर्‍यो।
फोर्टुना सिटार्डको साथ अविस्मरणीय अन्तिम खेल:
एक संग एक शानदार सफलता पछि, एक भावनात्मक अवधि आयो जब पेरले आफ्नो बिदाइहरू भन्नु पर्ने थियो। यो तब आयो जब युरोपका शीर्ष क्लबहरू (अजाक्स, बायर्न, डार्टमन्ड इत्यादि) बाट रूचि थियो जसले आफ्नो हस्ताक्षर अनुसरण गरे।
सत्य के हो भने, उहाँ हुर्कनु भएको गाउँमा भन्दा अलिकता पनि राम्रो भन्न सक्ने ठाउँ थिएन। के तपाईंलाई थाहा थियो?… फोर्टुना सिटार्डसँग पेरको फाइनल खेल एफसी आरआईए (उसको बाल्यकाल एकेडेमी) को बिरूद्ध खेल थियो। आफ्नो टीमको पक्षमा, खेल ०-१० मा अन्तिम स्कोरको साथ समाप्त भयो (फोर्टुनाले जितेको)।
म्याच पछि, र उसको पेरे शुरसका अभिभावक, परिवारका सदस्यहरू र गाउँका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा भावनात्मक केटाले मैदानमा हातमा फूलहरू राख्यो र आँखामा आँसु राख्यो। फोर्टुना लाई विदा लिन केहि तरिका। उनको गृहनगर एकेडेमी - एफसी आरआईए (० - १०) लाई हराए पनि, उनका प्रशंसक अझै पनि उनको अटोग्राफ प्राप्त गर्न उनको वरिपरि घुमे।
Perr Schuurs सफलता कहानी:
लिभरपूलसँग वार्ता असफल भएपछि, जवानले (२०१ 2018 मा) आफ्नो सपना क्लब एजेक्स छनौट गर्‍यो - प्राय जसो धेरैले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभाको लागि प्रजनन मैदानको रूपमा हेर्दछन्। एक बर्ष भन्दा कममा, Perr Schuurs Ajax को 'नयाँ डि Ligt' को रूप मा देखा पर्यो। उनलाई सीबीको प्रकारको रूपमा लेबल लगाइएको थियो जुन बलमा आरामदायी, आक्रमणकर्ताको साथ एक पछि अर्कोले राम्रोसँग पढ्ने बेला बनाइएको हो।
आफ्नो पेरको शुर्स बायोग्राफी लेख्ने क्रममा, उनको बचावत्मक शक्तिको बलले उनलाई कमाएको छ डच नेश्नल टीमको लागि छनौट। थप रूपमा, उनी अब (फेरि) युरोपियन फुटबलको शीर्ष प्रशिक्षकहरू द्वारा पीछा भइरहेको छ।
लिभरपूलको जर्गन क्लप्प पेर प्राप्त गर्न उसको हातमा युद्ध हुनेछ। क्लबले आफ्ना छोरा-छोरीलाई घाइतेले छोड्ने ठाउँ भर्न दिनको लागि आफ्ना बाबुआमासँग धेरै पटक छलफल गरिसकेपछि यो आउँछ Virgil van Dijk। जे भए पनि, पेरसँग पक्कै पनि एजेक्सको आशिष् हुनेछ। बाँकी, हामी भन्छौं, अब ईतिहास हो।
Perr Schuurs 'प्रेमिका को हो?
सफल फुटबलर पछाडि, एक ग्लैमरस WAG छ - जो उनकी पत्नी हुनु पर्छ। Roos Wijnands Perr Schuurs प्रेमिका हो।
दुबै पागल छन् एक अर्काको साथ प्रेम र के अनुमान?… उनीहरूले बाल्यकालदेखि डेटि began गर्न थाले। हेर, रूस विजान्ड्स र पेरे शुरस उनीहरूको प्रारम्भिक किशोरावस्थामा (उमेर १२)। पेरका अनुसार यो स्थान हो जुन उनीहरूले भेटेका थिए र उनीहरूको भेट पहिलो प्रेममा प्रेम थियो।
पेर श्युरस वाइफ (रुस) लाई जीविकाको लागि के गर्छ?
उनको फेसबुक प्रोफाइलका अनुसार उनी विज्नान्ड्स बोउमटेरियालेनमा काम गर्छिन्। मैले गुगलमा शब्द 'विजान्ड्स बोउमटेरियालेन' खोजें र पत्ता लगाए कि यो भवन निर्माण सामग्री हो। यो एक पारिवारिक कम्पनी हो जुन उनको आमा बुबा द्वारा स्वामित्वमा छ।
पेर जस्तै, उनकी श्रीमती हुनु पर्छ - रुस पनि एक सुनौलो हो। उनको मिठो रूप छ, पलक झिम्किएको छ र अत्यन्तै सुन्दर बन्ने छ।
अगस्त २०१ 2017 मा, पेर शुर्स गर्लफ्रेन्डले उनको दुबै सत्रहौं जन्मदिन भव्य शैलीमा मनाई। रुज विजान्ड्स २० वर्षको छ जब हामीले उनको प्रेमीको बायो लेख्यौं। यसले स that्केत गर्दछ कि Perr आफ्नो प्रेमिका भन्दा केहि महिना (एक बर्ष भन्दा कम) जेठी छ। उसले सम्झेको हुन सक्छ र छिट्टै उसलाई विवाह।
Perr Schuurs व्यक्तिगत जीवन:
पिचमा उसको गतिविधिहरू चिन्नुले तपाईंलाई लामो शट टेकरको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले प्रश्न ... Perr Schuurs को हो?
पहिलो, जब उहाँ फुटबलबाट टाढा हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो अध्ययनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। मनपर्‍यो काई हयात, Per धेरै शिक्षाको साथ आफ्नो क्यारियर मिश्रणको बारेमा धेरै गम्भीर छ। फेरि, ऊ आफ्नी श्रीमती, साथी र परिवारका साथ रमाईलो कुरा गर्न मनपराउँछ। पेर अत्यन्तै घरेलु मनोवृत्ति भएको एक नम्र, सफा र मिलनसार जवान छ। Roos Wijnands लाई धन्यबाद, ऊ ग्राउन्ड हुन्छ र उनीसँग घरमा बस्दा रमाईलो हुन्छ।
Perr Schuurs जीवनशैली:
डिफेन्डरले भरखरका महँगो घर (मन्सेन्स), कारहरू आदि मुट्ठीभर देखी चम्किलो पत्रिकाहरूबाट बच्न सक्दो कोसिस गर्दछ। पेर शुरसका अभिभावक र प्रेमिकाले सुनिश्चित गर्दछ कि उसले एन्टि-फ्ल्यासको दृष्टिकोण राख्दछ।
उहाँलाई जरा गाडेको भए पनि, दुबै प्रेमीहरूले अझै पनी समय पाउँछन् लोकप्रिय समुद्री तट र पर्यटन स्थलहरूमा जीवनको आनन्द लिनुहोस्। उसको कमाईलाई हेरेर, पेर शुर्सको कुल सम्पत्ति लगभग। 3.5 लाख युरो छ।
Perr Schuurs परिवार जीवन:
एउटा परिवारको साथ जहाँ सबै चीज जित्ने वरिपरि घुम्छ, तिनीहरू कति नजिकको बुनिरहेका छन् भनेर अनुमान गर्न सजिलो छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई Perr Schuurs 'आमाबाबु र उसको परिवारका बाँकी सदस्यहरूको बारेमा बढि सत्य कुरा बताउनेछौं।
Perr Schuurs 'आमाको बारेमा तथ्यहरू:
जसरी उनको छोरी (डेमी) ले एक पटक भनेकी थिइन, उनको आमा (मोनिक) परिवारको चालक हो। उनी एक सेवानिवृत्त भूलभुलैया विशेषज्ञ हुन् जसले एक पटक पजल खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छिन्। वर्तमानमा, मोनिक खेलकुद बच्चाहरू (डेमी, फ्लेउ र पेर) हुर्काउने केही आमाहरूमा गर्व गर्दै छन्।
खेलको उनको भूलभुलैया राख्दै, उनी लुगा धुने र घरमा राख्ने अन्य प्रकारका सबैका लागि सबै कुरा व्यवस्थित गर्नमा बढी केन्द्रित छिन्। लाम्बर्टको श्रीमतीको लागि, जीवन भनेको पारिवारिक बन्धन कायम राख्नु नै हो।
Perr Schuurs 'पिताको बारे तथ्यहरू:
अक्टोबर १ 15 1962२ को १ 312 तारिखमा जन्मिएको, लाम्बर्ट शुर्स एक निवृत्त अल्ट्रा-लामो-दूरीका धावक र hand१२ अन्तर्राष्ट्रिय क्याप्सको साथ आफ्नो ह्यान्डबल प्रो हो। हाल उनी नेदरल्याण्ड्सका ह्यान्डबल टोली लिम्बुर्ग लायन्सका सहायक प्रशिक्षक हुन्। मुनि तीन जनाको गर्वपूर्ण बुबा हुनुहुन्छ।
परिवारमा खेलकुदको अग्रगामीको रूपमा, लाम्बर्ट आफ्ना बच्चाहरूलाई खेलकुदको प्रेम जगाउन जिम्मेवार थिए - जसले उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्य छनौट गर्न स्वतन्त्रता दियो।
बुबा र पूर्व शीर्ष एथलीटको रूपमा, उसले अहिलेसम्म आफ्ना सबै बच्चाहरूको खेल गतिविधिहरूलाई राम्ररी पछ्याउँछ। लम्बर्ट आफ्नो छोराको क्यारियरलाई साधारण तरिकाले ब्यवस्थापन गर्न मन पराउँछन्, र उनी मिडियालाई आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न नचाहेको हो।
लाम्बर्ट बुबाको प्रकार हो जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूको क्यारियरको केही पक्षहरू आफैंलाई एजेन्टहरूबाट मद्दत बिना नै सम्हाल्न अनुमति दिन्छन्। उनको शब्दहरु मा ...
“पेयर एकेडेमीमा छँदा मैले उसलाई सकेसम्म एक्लै छोड्ने अनुमति दियो र उनी दैनिक टेबुलमा एजेन्टहरूसँग टेबुलमा बस्दैनन्। म त्यो जाँच्ने कोशिश गर्छु र यो पनि निश्चित गर्न कि उसको खुट्टा जमिनमा छ। "
Perr Schuurs बहिहरु को बारे मा:
डच फुटबलरका लागि, डेमी र फ्लेयू हुनु भनेको दुई उत्तम मित्रहरू जस्तो हुनु हो तपाईबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौं। तल चित्रित दिदीबहिनी उनका दुई खेल दिदीहरू हुन्। ती सबैको हृदयमा उही खेलकुद रगत बगिरहेको छ।
Perr Schuurs बहिनीहरू, डेमी (बायाँ) र Fleau (दायाँ) भेट्नुहोस्।
Perr Schuurs बहिनी फ्ल्याउ Sittard मा एक पेशेवर स्तर मा ह्यान्डबल मा छ। अर्कोतर्फ, डेमी एक टेनिस खेलाडी हुन् जसले एकपटक विश्वकै नम्बर १२ मा क्रमशः डबल्स (मार्च २०२० तथ्या12्कहरू) मार्फत वर्गीकरण गरे। उनीसँग उनको क्याबिनेटमा तीन डब्ल्यूटीए टूर्नामेन्टहरू छन् र उनको पेशाको कारण परिवारबाट धेरै टाढा बस्छिन्, जसमा धेरै यात्रा गर्नु समावेश छ।
Perr Schuurs अनटोल्ड तथ्यहरु:
तथ्य # १: प्रारम्भिक लिभरपूल स्टोरी:
२०१/2018/२०१ season सिजनमा, पेयरले अंग्रेजी महाशक्तिको लागि ट्रायलहरू यात्रा गरे। यो ऊ एजेक्समा छिर्नु अघि नै हो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… लिभरपूलले कल गरेर उसको लागि कठोर परीक्षणको तयारी गर्‍यो स्टीवन गेरार्ड सेवानिवृत्ति बाहिर पेर ताकि उसलाई भाग्य निर्धारित गर्न को लागी सामना गर्न सक्छ।
उसले स्टीभ-जी बिरूद्ध लडाई जितेपछि लिभरपूलले उनलाई year ०००,००० डलर-एक वर्षको तलब प्रस्ताव गर्‍यो। दुःखको कुरा, पेरे श्युरसका अभिभावकहरूसँग थप वार्तालाप टुक्रियो। यो ल्याम्बर्ट र मोनिकले आफ्नो छोरा एजेक्सको लागि खेल्ने निर्णय गर्नु अघि यो थियो।
तथ्य # १: फिफा स्थिति:
उसको कान्छो उमेरको लागि, Perr एक सभ्य फिफा तथ्या .्कहरू छ। उहाँ माथि दुई बुँदा छ रायन gravenberch, उनको साथी देशवासी र साथी। आफ्नो सम्भाव्यताको आधारमा, Perr एक फिफा उत्कृष्ट विस्कीड हो जसले हरेक क्यारियर मोड प्रबन्धकले किन्नुपर्दछ।
तथ्य # १: तलब ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्ड कमाई:
यूरोमा वेतन (€)।
प्रति वर्ष € 2,519,838
प्रति महिना € 209,987
प्रति हप्ता € 48,384
प्रति दिन € 6,912
प्रति घण्टा € 288
के तपाईंलाई थाहा छ?… नेदरल्याण्ड्सका औसत नागरिकले साप्ताहिक €€,,1 his डलर कमाउन १ वर्ष, महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तपाईंले Perr Schuurs हेर्न सुरु गर्नुभयो'बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: धर्म - एक ईसाई?
हाम्रो अनुसन्धान पछि, हामी बुझ्छौं कि शुरसको परिवारको नाम बाइबल, तोरह र कुरानमा भेटिएन। तसर्थ, हामीले उनलाई एक इसाई हुर्काउने सम्भावनालाई इन्कार गरिसकेका छौं र कुनै धार्मिक विश्वासको चिह्न छैन।
सुरुबाट, पेर शुर्सका अभिभावकहरूले स्वस्थ र सफल खेलकुद परिवार बनाउने योजना गरेका थिए। परिवारको तालिका कहिल्यै बदलिएको छैन र आज, लाम्बर्ट र मोनिकलाई यो थाहा पाउँदा गर्व छ कि पेरे, डेमी र फ्लेउ उनीहरूका सपनाहरू जित्दैछन्।
Perr Schuurs को जीवनी हामीलाई ध्यान दिन, दृढ संकल्प र स्थिरता कुञ्जी हो कि बुझ्नको लागि सिकाउँछ। यो सबै उसको क्यारियर उचाइमा प्रस्ट देखिन्थ्यो र अब यसको परिणाम पनि आएको छ शीर्ष यूरोपीय क्लबहरू (अन्तर र मिलान) एजेक्स डिफेन्डरको लागि लिभरपुल प्रतिस्पर्धा गर्दै.
पर्रको संस्मरणमा हामीसँग यो लामो समयको लागि तपाइँलाई धन्यवाद छ। कृपया यदि तपाइँले हाम्रो लेखमा सही नदेखिने कुरा याद गर्नुभयो भने कृपया हामी समक्ष पुग्नुहोस्। अन्यथा, फुटबलरको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ भन्नेमा टिप्पणी राख्नुहोस्। Perr Schuurs Bio मा द्रुत हेराईका लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: Perr Schuurs।
उमेर: २० बर्ष ११ महिना
जन्म मिति: 26 नोभेम्बर 1999।
जन्मस्थान: निउवास्टैड, नेदरल्याण्ड्स।
उपनाम: नयाँ Matthijs डे Ligt।
अभिभावक: लाम्बर्ट शुर्स (पिता) र मोनिक शुर्स (आमा)
Siblings: Fleau Schuurs (एल्डर बहिनी) र डेमी (तत्काल दिदी)
परिवारमा स्थिति: परिवारमा स्थिति:
फिट र इन्चमा उचाई:6फिट3इन्च
मीटरमा उचाई: 1.91 एम।
बुबाको पेशा: रिटायर्ड ह्यान्डबलर।
आमाको पेशा: सेवानिवृत्त भूलभुलैया पेशेवर।
बहिनीहरूको पेशा: Fleau ह्यान्डबल खेल्छ र डेमी टेनिस खेल्छ।